Tartanka dugsiyada sare ee Puntland oo habeenkii labaad caawa la tartamay iyo natiijadii tartanka caawa – Radio Daljir
Juunyo 21, 2015 4:03 g 0
Bosaso , Habeenkii labaad ee barnaamijka Tartan iyo Tacliin oo caawa galay ayaa waxaa tartan xiiso badan uu ku dhexmaray afar dugsi sare oo ka dhisan gobolada Cayn, Sanaag , Bari iyo Karkaar.
Qaybtii koowaad ee tartanka ayaa waxaa uu dhexmaray dugsiga sare Buraan Secondary oo ka dhisan magaalada Buraan ee gobolka Sanaag iyo Hawad Secondary oo isaguna ka dhisan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.
Labada dugsi ayaa mid walba dhankiisa waxaa uu dadaal ugu jiray midba midka kalle inuu ka guulaysto , waxaana gabagabadii guusha raacday dugsiga sare Buraan , natiijada ayaana sidaan noqotay
Hawd 2darajo , waxaana uu garan waayay afar ka mid ah shantii su\_’aal ee xaqa u lahaa
Buraan 7 , waxaa uu ka jawaabay sadex ka mid ah su\_’aalihiisii iyo hal ka faa\_’iidaysi ahaan uu u helay.
Dusgiga sare ee Xaaji Salaad oo ka dhisan degmada Carmo iyo Al-azhar Shariif oo magaalada Qardho ah ayaa ku tartamay qaybtii labaad ee barnaamijka caawa , waxaana ay guusha ay raacday dugsiga sare Al-azhar Shariif ee magaalada Qardho, waxaana ay kusoo dhamaatay natiijada.
Carmo waxaa uu ka jawaabay hal su\_’aal shantiisii su\_’aalood ee uu xaqa u lahaa , waxaana uu garan waayay afar su\_’aal , sidaasina waxaa uu ku helay laba darajo.
Dugsiga sare Al-azhar ee magaalada Qardho ayaa ka jawaabay afar ka mid ah su\_’aalihiisii la waydiiyay , waxaana uu ka faa\_’iidaystay hal su\_’ aal , sidaasina waxaa uu ku helay sagaal darajo.
Habeenka xiga ayaa waxaa tartanka u balansan , dugsiyada kala ah
Midigalle Secondary iyo Imaamu Shaafici Bosaaso
Imaamu Nawaawi Garoowe iyo Samatar Baxnaan oo magaalada Buuhoodle ah